२ हजार को लोभले ५० अण्डा खाने शर्त, ४२ वटा खाँदै गयो ज्यान !!! – News Nepali Dainik
२ हजार को लोभले ५० अण्डा खाने शर्त, ४२ वटा खाँदै गयो ज्यान !!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: १३:२२:५३
चाहिने भन्दा बढी जे पनि हानिकारक हुन्छ । उखान यसै बनाएको होइन ‘घाटी हेरी हाड निल्नु’ । शरीरले पचाउन सक्ने क्षमता नहुँदा जिद्दी गरेर केही हुँदैन । उल्टै मृत्युको कारण बन्न सक्छ । यस्तै एउटा घटना घटेको छ भारतको उत्तर प्रदेशमा ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 1:22 pm
११८२ पटक हेरिएको